मनोरञ्जन Archives - Samachar Post Dainik
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार १४:२१
म सँग गर्ने मन भए सम्पर्क गर्नुहोस् फोन नम्बर सहित Video Vudeo। युवतीमाथि क/रणी पछि लु’ट’पाट गरेको आरोपमा सुनसरी प्रहरीले १ पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ । भिडियो शेयरिङ सोसियल नेटवर्क टिकटकबाट चिनजान भएकी युवतीलाई होटलमा बोलाइ । यस्तो कार्य गरेपछि प्रहरीले कास्कीका पुरुषलाई इटहरीमा पक्राउ गरेको हो । पीडित.....
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०९:५९
काठमाडौ । शिक्षकको पेशा धेरै उच्च मूल्यवान छ। शब्दमा नै सम्मान छ । तर कहिलेकाहिँ केहि घटनाहरुले यो पेशाको मजाक पनि बनाउँछन्। यस्तै एउटा घटना अमेरिकाबाट बाहिर आएको छ जहाँ एक महिला शिक्षिका आफ्नै विद्यार्थीसँग शारीरिक सम्पर्क राखेको अभियोगमा पक्राउ परेकी छन् । यो सबै तब भयो जब शिक्षिकाले बिद्यार्थीलाई.....
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०९:२९
असाध्यै मिठो बोल्छन् यी ४ बार जन्मिने महिला, यस्ता पुरुष हुन्छन् बेखुशी काठमाडौँ । आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार.....
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०८:४८
सु’हाग-रा’तमा बे’हुलीको म’हिना-वा’री सुरु भ’यो! श्री’मान् को चाहना पूरा नगर्दा के गरे यस्तो? महिला अधिकारका कुरा गर्दा धेरै देशहरु अझै पछि नै छन् । यस्तै एक समाचार इजिप्टको छ, जहाँ एक महिलाको कथा सुन्दा जिउ काँ प्छ । त्यहाँ एक पुरुषले बिहे गरे ।तर जब सुहाग-रातको समय भयो, दुलहीको महिना-वारी सुरु भयो । त्यसपछि.....
के मोटोपनले यौ;न जीवनमा असर पुर्‍याउँछ ?
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०७:३५
भोक, निद्रा, प्यासजस्तै यौन पनि मानवीय आवश्यकता हो। उमेर, परिस्थिति तथा व्यक्तिअनुसार यौनको चाहना पनि फरक–फरक हुन सक्छ। तर, यौन उत्तेजना नै नहुनु तथा यौन सन्तुष्टि पाउन नसक्नु चाहिँ गम्भीर कुरा हुन्। यसका शारीरिक वा मानसिक अथवा दुवै कारण हुन सक्छन्। व्यक्ति विशेषको स्वास्थ्य समस्या, यौनप्रति विगतको.....
पुरुषलाई आफ्नो माया जा’लमा फ’साउन के सम्म गर्दैनन् सुन्दरी युवतीहरु ?
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०७:१२
एजेन्सी । मानिसको जीवनमा मिलन बि’छोड भन्ने कुरा सामान्य हो । तर बिछोडमा पुरुषहरु भन्दा महिला बढी छ’टपटीने गर्छन् । प्रेममा धो’का खाएपछि महिलाहरू सबैभन्दा बढी के गर्छन् त भनी हालै गरिएको एक अ’नुसन्धानका क्रममा सम्बन्ध टु’टेपछि महिलाहरूले आफ्नो सबैभन्दा बढी आफ्नो तौल घटाउने गरेको पाइएको छ । अन्तराष्ट्रिय.....
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०७:०९
अंग्रेजिमा एउटा भनाई छ “वुमन इज अ फराइन ल्याण्ड”, अर्थात महिला बुझ्नै नसकिने प्राणी हो । महिलाले साच्चिकै जिवनमा के चाहन्छ ? त्यो पनी २० वर्षको योङ्ग उमेरमा । यो आफैमा अनुत्तरित प्रश्न हो । महिलाले यो टिनएजमा केही निश्चित चिजहरु चाहन्छन् । जस्लाई तपाइँ हामिले उनिहरुको सामान्य व्यावहारबाट पनी थाहा पाउन.....
११ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०२:४७
सम्बन्ध बिगार्ने यस्ता समाचार प्रायः सुन्न र देख्न पाइन्छ । आजको जमानामा सम्बन्धको कुनै महत्व छैन । मानिसको नियत बिग्रदै गएको छ र साथमा सम्बन्ध पनि बिग्रदै गएको छ । घर भित्र होश या बाहिर मानिसले यस्तो काम गर्छन् कि पवित्र सम्बन्ध माटोमा मिल्छ। यस्तै एउटा घटना भारतको उत्तर प्रदेशबाट बाहिर आएको छ जहाँ.....
१० कार्तिक २०७८, बुधबार १४:१२
नायिका नम्रता सापकोटाले आफूसँग जोडिएर आएको प्रेमको चर्चालाई नकार्न नसक्ने बताएकी छन् । न्यूज २४ को ‘ई टक’ कार्यक्रममा बोल्दै आफू धेरै कोएक्टरसँग सँगत गर्नु परिरहेको अवस्थामा बाहिर आउने प्रेमका चर्चाहरुलाई नकार्न नसक्ने उनले बताएकी हुन्। ‘कहिले काँही आफूसँगै अभिनय गरिएको ‘को एक्ट’सँग बसिन्छ । चिया.....
के तान्त्रिक शा’री’रिक स’म्पर्क ? किन लोकप्रिय बन्दै छ यो बिधि ?
१० कार्तिक २०७८, बुधबार १०:४३
काठमाडौं । शा’री’रिक स’म्प’र्कका विभिन्न तरिकाका बारे धेरै थरि बहस हुन्छ । यी बहसहरूमध्ये पछिल्लो समय चर्चा शुरु भएको छ ता’न्त्रिक शा’री’रिक स’म्प’र्क । केही अनुसन्धानले तान्त्रिक शा’री’रिक स’म्प’र्कमा सहभागी जोडीले भरपुर सन्तुष्टि पाउने उल्लेख छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार युवाहरु तान्त्रि’क शा’री’रिक.....